Captions dị ndụ ga-etinye ihe ekwuru na oku ekwentị n'ime ederede | Gam akporosis
Google kpughere Live Captions afọ gara aga n'oge Google I / O o na enye anyi ohere “jide” n’ederede ihe onye na-agwa ya na-ekwu. Nke ahụ bụ, anyị ga-enwe oku niile na ederede ka anyị mechara ya. Akụkụ na-adọrọ mmasị nke yiri ka ọ na-akwadebe Google iru ọtụtụ ngwaọrụ karịa ka ọ dị ugbu a.
Anyị na-eche ihu otu n'ime ọrụ ndị ahụ nke Google jiri ju anyi anya mgbe ụfọdụ. Iji usoro mmụta igwe atọ, ihe ngosi Live Captions a nwere ike ịchọpụta okwu mmadụ ma wepụta ederede ederede na akpaghị aka.
Ọrụ a batara na Pixel 4 ma na-abanyekwu mobiles dịka ndị ọzọ Pixel, the Samsung Galaxy S20 na OnePlus 7T na 8. Ebe ọ bụ na atụmatụ a malitere ọ natabeghị mmelite ọ bụla, ya mere, teardown nke emere nke ọhụụ Android Developer 3 preview 11 yiri ka ọ na-egosi na ọ ga-eru ekwentị niile; ebe a ị nwere ike ịma akụkọ niile si 2 gara aga.
Caption Live ga-arụ ọrụ na ekwentị Android 11 a makwaara ya site na akara nke koodu dị na mbipute 2.13.302920511 nke Ngwaọrụ Nhazi Ngwaọrụ, ngwa maka ọrụ a na ụdị nke 11 nke gam akporo. Ha bụ akara ole na ole ebe koodu gosipụtara na ịmalite ọrụ ahụ gosipụtara iji nyefee ederede ihe oku na-abata na-ekwu.
Site na ime ka njirimara a rụọ ọrụ na oku ekwentị, a ga-atụgharị ihe niile ekwuru na ya n'ime ederede. N'ezie -akpọ sonyere ga-mara ọkwa nke mere na ha mara banyere otu ihe ahụ edere na ederede.
Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na anyị ga-emesị nwee Ndepụta Ndụ na gam akporo 11, Ya mere, anyị ga-echere ka ọ na-eme na ọtụtụ n'ime akwụkwọ akụkọ ndị Google na - ejikọkarị; ebe ọ bụ na e nwekwara ndị na-anọ ọkara tupu ịmalite ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na akwado gi ka ijiri “Live captions” n'oge oku
Huawei Nova 7, Nova 7 Pro na Nova 7 SE: Ekwentị ndị ọhụrụ bịara na Kirin processor, igwefoto anọ na 5G